Qaabab Dabiici Ah Oo La Iskaga Daawayn Karo Cuncunka Madaxa Iyo Qolofta (Dandruff) - Daryeel Magazine
Qaabab Dabiici Ah Oo La Iskaga Daawayn Karo Cuncunka Madaxa Iyo Qolofta (Dandruff)
Qolofta ka dhex abuuranta timaha meesh ay timuhu ka haystaan lafta madaxa ayaa aad u ceebaysa dadka oo laga yaabaa in dad badani kugu qoslaan ama kaga naxdsadaan adigoon jooga meel caam ah.
Shaambooyinka iyo dawooyinka baab’iya ayaa qaali ah iyagoo ku darsaday inaad had iyo goor isticmaashid oo jirkaaga la qabsado.
Hadaba si aad iskaga baab’iso adigoon wax qaali ah soo gadanin oo isticmaalaya alaab aad guri walbo ka heli kartid, waxa uu daryeelmagazine.com soo aruurinay maadooyin si wanaagsan iyo waqti yarba kaga baabi’inaya qolofta madaxa (dandruff) iyo cuncunka madaxa.
Aasbariin oo ah kaniinka madax xanuunka loo qaata ayaa ah mid waxyaabo badan loo isticmaalo ayna ka mid tahay qolofta (dandruff). Soo qaado 2 xabo oo kaniinkaan ah burburi kuna dar shaambada aad madaxa ku dhaqanaysid, ku daay madaxaaga mudo dhan 2 daqiiqo adoo si fiican lafta madaxa u gaarsiinaya. Markaas biyo iskaga mayr iyo shaambo caadi ah si aad urka aasbariinka uga baabi’isid madaxaaga haday wax ku hareen. Aasbariinka ayaa ku jira madaada Salicylic oo ah maadada ugu firficoon oo lugu daro shaamboyinka baabi’iya qolofta.
Saliid Saytuun (Olive oil): Qandici saliid markas si wanaagsan u mari lafta madaxa adigoo timaha salkooda gaarsiinaya, bac ku xiro madaxa oo u daa mudo 1 saac ah kadibna shaambo iskaga dhaq.
Saliida qumbaha (conconut oil), ayaa loo isticmaali kara in lafta timaha lagaga nadiifiyo qolofta ku beermata. madaxa marso 3 ilaa 5 qaado oo saliid qumbe ah adigoo u dayna mudo hal saac ah kadibna shaambo iskaga mayr
waa anti- fungal waxay dishaa bakteeriyada keenta qolofta madaxa. Burburi toonta kadibna madaxa ku xoq hadii aad dhibsanaysid urkeeda ku darso malab kadibna iska mayr.
Khalka oo aynu badana u isticmaalno inaa talaajada ku nadiifisano ama muraayadaha, ayaa sidoo kale nadiifiya lafta timaha oo wasaqda dhan ka mayri kara.
Kicisada burka (Baking Soda):
Kicisada burka ayaa ka baabi’in karta qolofta ku dhalata madaxa. Ku dar xoogaa yariisa shaambada aad ku qubaysatid oo sidaas ku wad mudo 3 isbuuc dhan. Markasta si wanaagsan madaxaga ugu dhaq. Dignin: mudo dheer haku dhaafin madaxaga kicisada oo waxay ku keeni karta waxyeelo jirkaga.
Madaxaaga ku duug dacarta (Aloe Vera) kadibna shaambo isticmaal
Liin dhanaan (Lemon):
Biyaha liin dhanaanta oo aad ku daliigtid madaxaga mudo 15 ilaa 20 daqiiqo waxay ka dhamayn karta qolofta abid. Markaas ka qubayso oo yaysan ku qalalin timahaaga ayadoo ka angajin karta timaha.
Akhriso: Sida liin dhanaanta jirka loogu qurxiyo Qoloftu yeysan madaxaga hooy ka dhigan oo intaas lugugu dacayadayn ee siyaabahaan kor ku xusan iskaga baabi’i.
Sidee iskaga baabi’in kartaa cuncunka madaxa (itchy scalp)?
Waxyaabaha kor ku xusan sida khalka, saliid qumbaha iyo liin dhanaantu way baabi’iyaan cun cunka madaxa, sidoo kale si aad iskaga daawaysid cuncunka waxaad isku qasta 2 xabo oo muus ah iyo 1 xabo oo avocado ah kadibna madaxa marso oo u daa mudo 3o daqiiqo ah. Afakaadhadu way u roontahay timaha oo way nuurisaa wayna bixisaa.
Sources: qalanjo.com & top10homeremedies.com
Siyaabaha Loo Daawayn Karo Qallaylka Iyo Jeexjeexa Cagaha